सेक्स गरिरहन मन लाग्छ म के गरूँ ? - Lekbesi Khabar
२०७६ चैत्र २०, बिहिबार
सेक्स गरिरहन मन लाग्छ म के गरूँ ?
म २५ वर्षीय अविवाहित युवक हुँ । मलाई सेक्सप्रति बढी नै चाहना हुन्छ । यस्तो चाहना ९ कक्षा पढ्दादेखिकै हो । म अहिले बीबीएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छु ।
अझै पनि त्यस्तै हुन्छ । दिनमा दुई–तीन पटक हस्तमैथुन गर्छु । मलाई युवती देख्नासाथ उत्तेजना आउँछ अनि हिँड्दा पनि लाज लाग्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ । के सेक्स चाहना बढी हुनु कुनै रोग हो ? हस्तमैथुन धेरै गरे त्यसको नकारात्मक असर पर्छ ?
यौनचाहना हामीलाई प्रकृतिले दिएको एउटा विशेषता हो र सबै स्वास्थ्य व्यक्तिमा यौनचाहना हुन्छ । यो हाम्रो वंश निरन्तरताका लागि पनि आवश्यक छ । यौनसम्बन्धी हाम्रा चासो तथा चाहनाहरू मस्तिष्कबाट सुरु हुन्छन् ।
मस्तिष्कको hypothalamus गक भनिने सानो अङ्गले यौनसम्पर्क राख्ने जस्ता आधारभूत व्यग्रता उत्पन्न गर्छ भने अर्को अङ्ग Cerebral Cortex ले हामीले सिकेका कुरा तथा अनुभवहरू अभिलेख राख्ने कार्य गर्छ ।
यौन संवेदनशीलतासम्बन्धी कुराहरू पनि यही भागबाट सञ्चालित हुन्छन् । यौनेच्छालाई प्रभावित तुल्याउने हार्मोनहरूको उत्पादन तथा सञ्चालनमा पनि मस्तिष्कको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यी सबै कुराको संयुक्त प्रभावबाटै यौनसम्बन्धी क्रियाकलापहरू निर्देशित हुन्छन् ।
मोटामोटी रूपमा हेर्दा यौनेच्छाको सञ्चालनमा विभिन्न प्रणालीहरू सक्रिय देखिन्छन् । एकातिर इन्डोक्राइन सिस्टम अन्तर्गतका रागरसहरूले त्यसको सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् भने अर्कातिर इन्द्रिय प्रणाली अनि मस्तिष्कले ।
यौनेच्छा बढी किन होला ?
यौनेच्छा राम्रोसँग हुनुलाई त सौभाग्य नै मान्नुपर्छ । यौनचाहना पनि सबै व्यक्तिमा एकैनासको हुँदैन । कसैमा बढी हुन्छ त कसैमा कम । कुनै व्यक्तिमा यति नै यौनचाहना हुनुपर्छ भन्ने छैन ।
हुनुपर्नेभन्दा बढी यौनचाहना भएको स्थितिलाई excessive sexual desire भएको भनिन्छ, त्यसका लागि hyperactive sex वा hypersexualityशब्द प्रयोग गरिन्छ । यस्तो स्थिति चिकित्सकीय दृष्टिकोणले ध्यान दिनुपर्ने गरी बढी नै भएको हुनुपर्छ । यद्यपि कति यौनचाहनालाई बढी भन्ने कुरामा अझै पनि विवाद छ ।
कुनै व्यक्तिले सामान्य मानेको यौन चाहनालाई अर्को व्यक्तिले कम वा बढी मान्न सक्छ ।
यस्तो किन हुन्छ, यकिनका साथ भन्न सजिलो छैन । के कति कारणले कुनै व्यक्तिमा अत्यधिक यौनेच्छा जागृत हुन्छ भन्ने कुराको निक्र्योल गर्न गाह्रो छ । यसका मानसिक तथा शारीरिक दुवै कारण हुन सक्छन् । यसका कमै मात्र शारीरिक कारण भेटिन्छन् ।
विशेष गरेर पुरुष हार्मोन अनि यससँग सम्बन्धित मस्तिष्कको कार्यप्रणालीमा भएको कुनै गडबडी नै यस्ता कुराका कारक हुन्छन् । केही स्थितिमा यस्तो व्यवहार स्नायु प्रणालीसम्बन्धी विकारले पनि उत्पन्न हुनसक्छ । अन्य कतिपय स्थितिमा मनोवैज्ञानिक पक्ष जिम्मेवारी हुन्छन् ।
विशेष गरेर म्यानिक डिसअर्डर भएका व्यक्तिमा यस्तो अत्यधिक यौनेच्छा वा कामुकता देखिएको छ । कतिपय विशेषज्ञले यौन व्यवहारमा अब्सेसन वा कम्पल्सन हुनुलाई एक किसिमको मनोरोग बताएका छन् ।
यस किसिमको यौन व्यवहार व्यक्तिको मुड वा पर्सनालिटी डिसअर्डर वा अन्य भावनात्मक समस्या सामना गर्ने संयन्त्रको गडबडीका कारण पनि उत्पन्न हुन्छ भनिन्छ ।
कति बेला असामान्य
तपाई अविवाहित नै हुनुहुन्छ र नियमित रूपमा यौनेच्छा शान्त पार्न यौनजोडी नभएकाले हस्तमैथुनको सहारा लिनुभएको देखिन्छ । हस्तमैथुन निकै गर्नुभएकाले तपाई मा यौनेच्छा उच्च रहेको देखिन्छ तर हस्तमैथुन गरेका कारणले नै तपाईंलाई कुनै रोग लागेको छ भन्न मिल्दैन ।
दृष्टि होस् वा स्पर्श हाम्रा इन्द्रियहरूले यौनसम्बन्धी सन्देश प्रवाह गर्नासाथ हामी यौन उत्तेजना हुनसक्छ, यसलाई पनि असामान्य भन्न मिल्दैन ।
आफूले लगाएको कमिजलाई पाइन्टभित्र नकसी बाहिरतिरै राख्नुभए लिङ्ग उत्तेजित भए पनि अरूले थाहा पाउँदैनन् । कसैको दैनिक सामाजिक जीवन नै बिग्रने वा तनावपूर्ण हुने गरी यौन व्यवहार देखिन थालेको स्थितिमा भने यौनचाहना बढी भएको स्थिति भन्न सकिन्छ ।
यौनेच्छा शान्त पार्न यौनजोडीलाई नै धोका दिएर अर्को व्यक्तिसँग यौन सम्पर्क राख्ने, देहव्यापार अनि अश्लील सामग्रीमा खर्च गर्ने मात्र होईन, आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि संलग्न कार्यमा ध्यान नदिने वा काम छोड्ने व्यवहार प्रदर्शन भए समस्या सिर्जना हुन्छ ।
उत्तेजना बढेपछि यौन क्रियाकलापमा संलग्न नभैनहुने बाध्यात्मक स्थिति अनुभव गर्नु असामान्य रूपमा यौन चाहना बढी अर्थात् अति कामुकताको एउटा महत्वपूर्ण लक्षण हो ।
यस्तो स्थितिमा आत्मनियन्त्रणका प्रयास सफल हुँदैनन् । आफूले चाहेर पनि आफ्नो यौन व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने भए वा यस्तो व्यवहारले परिवार वा साथीसंगतीसँगका सम्बन्धलाई नकारात्मक प्रभाव पार्न थाले वा कार्यालय वा व्यवसायको काम वा दैनिकी नै प्रभावित भए वा जहिले पनि विशेष गरेर आफूले नचाहेको बेलामा पनि यौनसम्बन्धी कुरा मात्र दिमागमा निरन्तर रूपमा आइरहे विशेषज्ञको सहयोगको नलिई नहुने भएछ भनेर बुझ्नुपर्छ ।
पहिलो कुरा त आफूमा असामान्य यौनचाहना छ/छैन पक्का गर्नुपर्छ । यदि अत्यधिक यौन चाहना भएकै हो भने उपचारका लागि पहल गर्नुपर्छ । यसको कारण शारीरिक वा मानसिक दुवै हुने भएकाले त्यसको पहिचान गर्नुपर्छ । लज्जा, भय र असजिलोपनका कारणले यस्तो समस्या समाधानका लागि पहल नगर्ने स्थिति हुन सक्छ ।
उपचारका लागि बानी–बेहोरा परिवर्तन गर्ने विधिहरू फाइदाजनक हुन्छन् । त्यसैगरी साइकोथेरापी वा औषधीको प्रयोगबाट यसलाई केही कम गर्न सकिन्छ । केही मनोस्थितिसम्बन्धी खराबीमा औषधी दिन सकिन्छ ।
हामीलाई थाहै छ टेस्टेस्टेरोन हार्मोन नै यौनेच्छालाई निर्देशित गर्ने प्रमुख तत्व मानिन्छ । कतिपय स्थिति जसमा विशेष गरेर पुरुष हार्मोन बढी हुनु यसको कारण हुन सक्छ, त्यसलाई रोक्ने किसिमका औषधी खान सकिन्छ । समस्याको समाधानका लागि तपाईंलाई विज्ञ चिकित्सकले सहयोग गर्न सक्छन् ।साप्ताहिक पत्रिकाबाट साभार
११ जेष्ठ २०७६, शनिबार २०:२९ May 25, 2019
विद्यार्थीलाई पहिलो दोस्रो छुट्याउनु नै गलत
भारतले पानी छाड्दा डुबानः ९० परिवार नदीले घेरिए
अमेरिकामा कोरोनाले ६ हप्ते शिशुको ज्यान लियो
३ दिनको शिशुमा पनि कोरोना संक्रमण
लकडाउनका कारण दूध दुहेर भैंसीलाई नै खुवाउन बाध्य कृषक !
एकजना पनि कोरोनाको बिरामी नभएको उत्तर कोरियाको दाबी
नेपालमा भेटिए कोरोनाका छैटौं संक्रमित
कोरोना रोकथाम तथा उपचारको लागि नेपाल आयल निगमद्वारा ५० करोड सहयोग